Waakee Ciyaartoyga Kaptan Lionel Messi Qolka Labiska Kula Dagaalamay Isla Dalka Argentina Ka Soo Wada Jeedaan? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kabtanka xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa la ogaaday in uu waqti si cadho leh ugu dhaqmay qolka labiska isla markaana uu isku dayay in uu dagaal la galo mid ka mid ah ciyaartoydii xulka qarankiisa Argentina ee ay soo wada ciyaareen.
Inta uu garoonka ku jiro lagama dareemo inuu ciyaartoyga kooxdiisa u cadhaysan yahay, waxaana yar in ay indhahaagu qabtaan isaga oo faraha fiiqfiiqaya wax kasta oo dhaca marka laga yimaaddo in laacibiinta kasoo horjeedaa ay qalad ku galaan amaba uu saluugo go’aan garsoore.
Laakiin waxa kaa qarsoon in xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi uu sannadkii 2011 dagaal ugu badheedhay ciyaartoy ay xulka qarankiisa u wada ciyaarayeen oo qaladaad sameeyey marar uu isku dayay inuu kubadda u dhiibo.
Falkan oo dhacay intii uu socday Tartankii Copa America ee 2011 lagu qabtay Argentine, waxa ka sheekeeyey difaacii kooxda Roma ee Nocolas Burdisso oo ahaa qofka uu Messi kula dagaallamay qolka lebbiska.
Inkasta oo Lionel Messi aanu cadho badan ku muujin garoonka dhexdiisa, haddana waxa uu Nocolas Burdisso ka sheekeeyay murankii iyo xurguftii dhex martay isaga iyo Lionel Messi markii uu ka qalday kubbad uu doonayay in uu Messi siiyo.
“Garoonka dhexdiisa ayaanu ku dhex-muranay. Waxa uu doonayay kubadda, aniguna waan rabay inaan isaga siiyo, laakiin maan samayn karin.” Ayuu yidhi Nicolas Burdisso oo ka sheekaynayay sidii wax ku bilaabmeen.
Difaacan oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi: “Ciyaarta dhexdeeda muu degganayn, aniguna waxaan ku jiray xaalad kacsan. Kaddib qolka lebbiska ayaanu soo galnay, waxaanan arkay isaga oo soo gelaya.
“Waan joojiyey, qof kastaana wuu na kala qabtay, maanaan dagaallamin.” ayuu Nocolas Burdisso hadalkiisa ku sii daray.
Ugu dambayntii waxa uu Burdisso sheegay in Lionel Messi uu leeyahay shaqsiyad wanaagsan iyo dhaqan fiican, isaguna uu sidiisa oo kale yahay, taasina ugu dambayntii keentay in wax walba ay si fiican ku dhamaadaan.